Apple က TV ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: စတုတ္ထမျိုးဆက် streaming များ box ကိုအပြည့်အဝဖုတ်မဟုတ်ပါဘူး - သတင်း Rule
Apple က TV ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: စတုတ္ထမျိုးဆက် streaming များ box ကိုအပြည့်အဝဖုတ်မဟုတ်ပါဘူး
အဆိုပါ Apple က TV ကိုအပြည့်အဝဖုတ်မဟုတ်ပါဘူး. အဆိုပါဗီဒီယိုအစိတ်အပိုင်းများခြားနား, ဒါပေမယ့်မရရှိနိုင်ပါအကြောင်းအရာများကိုဗြိတိန်အတွက်သတ်သည်. အဆိုပါဂီတ app ကိုဆင်းရဲ, ဝေးလံခေါင်ဖျား app ကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူးနှင့်အခြား-bits ပဲအဆင်သင့်မဟုတ်.
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Apple က TV ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: စတုတ္ထမျိုးဆက် streaming များ box ကိုအပြည့်အဝဖုတ်မဟုတ်ပါဘူး” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com အင်္ဂါနေ့ 24 နိုဝင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2015 07.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အသစ်ဟာ Apple TV ကို app များနှင့်သင်၏ရုပ်မြင်သံကြား-ကြည့်ရှုအတှေ့အကွုံ revolutionize ကတိပြု, iTunes နဲ့ Siri, ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်ခွဲ-ဖုတ်ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့အလွန်ခံစားရ, မစတုတ္ထမျိုးဆက်တဦးတည်း.
အသစ်ဟာ Apple TV ကိုတစ်ဦးသေးငယ်သည်, သင့် TV အောက်မှာထိုင်ရတဲ့အရာတွေအနက်ရောင်သေတ္တာ. ဒါဟာယခင် Apple ကတီဗီအဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်သေးငယ်တဲ့မင့်, ကတတိယကြီး၏ရဲ့အဖြစ်, ဒါပေမယ့်မရရှိနိုင်ပါသည်အခြား streaming များ-မီဒီယာသေတ္တာကဲ့သို့တူညီသောအရွယ်အစားအကြောင်းဖွင့်.
ကတက်ချိန်ညှိခြင်းအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်. အာဏာကို cable ကိုအတွက် Plug, HDMI cable ကိုသုံးပြီးသင့် TV ကတက်ချိတ်. တ box ထဲမှာထောက်ပံ့သည်မဟုတ်, မှာ ethernet cable ကိုမဟုတ်.
ဝမ်းနည်းစရာ, သင်က Apple Store မှဝယ်လျှင်ပင်, Apple ရဲ့ TV ကိုသင်၏ Apple ID နဲ့ Pre-configured မလာပါဘူး. အမေဇုံလည်းမီးသတ်တီဗီနှင့် Apple နှင့်အတူဤသင့်ပါဘူး.
သင့်အနေဖြင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖွင့်လှစ်ရန် options နှစ်ခုရှိ. သငျသညျ Wi-Fi နှင့် iTunes အကောင့် setup ကိုတစ်ဦးက iPad သို့မဟုတ် iPhone ကိုအသုံးပွုနိုငျ, ဒါမှမဟုတ်ဝေးလံခေါင်ဖျားနှင့်သင်၏အသေးစိတျကို manually ရိုက်ထည့်ပါ.
ဝေးလံခေါင်သီ-based setup ကိုရိုးရှင်းတဲ့ခဲ့သည်, ဒါပေမဲ့စာသားကိုဝင်ငွီးငှေ့ဖှယျခဲ့သည်. တစ်ဦးက iPad ကို setup ကိုအသုံးပြုခြင်းတဖန်ငါအားလုံးပြန်စဖို့ခဲ့ရတယ်အဓိပ္ပာယ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရပ်တန့်. သို့သော်ထိုသို့က box ရဲ့ထိပ်ပေါ်မှာရိုးရိုးတက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုအမြန်ကိုထိပုတ်ပါရဲ့အလုပ်လုပ်ရသောအခါထို့နောက်စက်ပေါ်ရှိညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာ. ငါးမိနစ်နှင့်သင်တို့ပြုသောအမှုဖွင့်.
setup ကိုပြုမိသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာဆိုရင်. အဘယ်သူမျှမအမြန်သင်ခန်းစာသို့မဟုတ်အကူအညီနဲ့ရှိပါတယ်နှင့်နောက်ကွယ်မှ hidden အတော်လေးအများကြီးဖွင့်. ဥပမာအားဖြင့်, နှစ်ဆ "အိမ်" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး, တကယ်တော့ဒါဟာအပေါ်တစ်ဦးတီဗီဖန်သားပြင်အိုင်ကွန်နှင့်အတူတရာသည်, သငျသညျပြေး apps များအကြားလဲလှယ်နိုင်ဒါကြောင့်သင်မကြာသေးမီကအသုံးပြု app များကိုတစ်ဦး menu ကိုမှကြာ. ထိုသို့ကြိုးစားရန်သင့်အားဖြစ်ပေါ်လာဖို့မဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်ဖွင့်; ငါမတော်တဆမှုအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြု.
ဝေးလံခေါင်ဖျား၏ထိပ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု touch pad သည်နှင့်ဖိအခါ, တစ်ကြီးမားသောခလုတ်ကိုအဖြစ်ပြုမူ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
သိုလှောင်ခြင်း: 32 သို့မဟုတ် 64GB
အသံ: Dolby Digital က 7.1
Connections ကို: 10/100 Ethernet, HDMI 1.4, ကို USB-C ကို, Wi-Fi ကို ac, ဘလူးတုသ် 4.0
ဒိုင်မန်းရှင်း: 98 x က 98 x က 35mm
အဆိုပါ Siri ကို Remote အသစ်ဖြစ်၏. ဒါဟာတဦးတည်းကုမ္ပဏီကြီးခလုတ်ကိုအဖြစ်ပြုမူသောထိပ်မှာတစ်ဦး touchpad ကိုရှိပါတယ်. ဝေးလံခေါင်ဖျား၏ကျန် menu ကိုရှိပါတယ်, အိမ်နှင့် Siri ကိုခလုတ်, အသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးခေတ္တနား / ပြဇာတ်ခလုတ်ကို.
သင်တစ်ဦး Lightning cable ကိုအတူကကောက်ခံသော်လည်းပါဝါအဒက်မပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာ Apple ကတီဗီမှစွဲချက်တင်မရနိုငျသျောလညျးမအလင်းသို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှသူကအားသွင်းတဲ့အခါပွောဆိုဖို့ဝေးလံခေါင်ဖျားပေါ်မှာရှိပါတယ်.
ဒါဟာဘလူးတုမှတဆင့် Apple က TV ကိုချိတ်ဆက်နှင့်သင့် TV သို့မဟုတ် amp အပေါ် volume ကိုထိန်းချုပ်ဘို့တခု IR blaster ရှိပါတယ်, အရာအလိုအလျှောက်မယ့်အလုပ်လုပ်သင့်တယ်, သငျသညျကြှနျုပျသဆိုနီ amp အတူပြုသကဲ့သို့ကိုယ်တိုင် program ရန်ရှိသည် မှလွဲ..
ကိုပွတ်ဆွဲ, ကိုပွတ်ဆွဲနှင့်ပိုပြီး swipe
အ interface ကိုသွားလာရန်, ပွတ်ဆွဲ, app ကို select လုပ်ပါကတက်ပစ်ခတ်ဖို့အ touch pad နှိပ်နင်း, ထိပ်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကနေဖြစ်စေ select လုပ်ပါအကြောင်းအရာများ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ထို touchpad ကိုအပေါ်ပွတ်ဆွဲနေတဲ့ Directional Pad ပါသုံးပြီးထက်လျော့နည်းအကျိုးရှိစွာဖြစ်ပါသည်. လျင်မြန်စွာကိုပွတ်ဆွဲအရှိန်အဟုန်တစ်နည်းနည်းနှင့်အတူ scroll, သငျသညျတယောက်တည်းခြေလှမ်းရွှေ့ဖို့တစ်ဖက်သို့မဟုတ်အခြားသာပုတ်နိုင်သည်, မှန်သော, တက်သို့မဟုတ်လှဲချခြင်းနှင့်ရွေးဖို့နှိပ်နင်း. ငါမယ့်ရှည်လျားစာရင်းကတဆင့် scrolling များအတွက် button ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်ကိုင်နိုင်လိုထားရှိမည်.
အဆိုပါ interface ကို inertia built-in ဖြစ်ပါတယ်. ထို touchpad ကိုပေါ်တွင်သင်၏လက်ညှိုးကို Move နှင့် cursor တစ်လျှောက်လာမည့်ရုပ်ရှင်မှပိတ် selector zips ရှေ့တော်၌ပေါ်ဝဲနေသည်ကလျှင်အဖြစ်ရုပ်ရှင်ပိုစတာအနည်းငယ်ပတ်လည်မှာလှုံ့ဆျော. ဒါဟာအမြင်အာရုံဆွဲဆောင်မှုရဲ့ငါမူကားထိုသို့မဆိုပိုမိုလွယ်ကူသုံးပြီးလုပ်ဘူးကိုတွေ့ - တကယ်တော့, ဒါကြောင့်တကယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရွေးချယ် inhibited.
စကားသံကိုထိန်းချုပ်မှုကို start up ဖို့ Siri ခလုတ်ကိုကိုင်ထားပါ. သငျသညျ apps များဖွင့်လှစ်နိုင်, ရိုးရှင်းတဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးမြန်း - ထိုသို့သောအဖြစ်: "ရာသီဥတုဘယ်လိုလဲ?"- နဲ့ရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီရှိုးရှာဖွေ, ဒါပေမယ့်သင်ဂီတသို့မဟုတ်အရာအားလုံးထက်ရှာဖွေကြကုန်အံ့မပါဘူး.
အဆိုပါလိမ္မာပါးနပ်နည်းနည်းအမျိုးမျိုးသို့ရှာဖွေရေး၏ပျက်ပြားဖြစ်ပါသည်. ဥပမာအားဖြင့်, ခလုတ်ကိုနှိပ်နှင့် "Archer" ဟုဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက် iTunes ကစတိုးဆိုင်နှင့် Netflix နဲ့မှ Archer ၏အားလုံးရာသီဖွင့်တတ်၏ (US မှာပိုပြီးန်ဆောင်မှု). ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့င်နှင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်.
ထိုကဲ့သို့သော "သာလျှင်ကောင်းသောသူတို့" အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် "ပီယပ် Brosnan ရုပ်ရှင်" အဖြစ်ပိုမိုအဆင့်မြင့်ရှာဖွေမှုများကိုစကားသံကိုထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့ပြသထားတယ်. ဒါဟာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်.
ကိုယ်တိုင်အကြောင်းအရာ browsing တွေအများကြီးနှေးနှင့်လျော့နည်းကျေနပ်စရာဖြစ်ပါသည်.
ရွေးချယ်ထားတဲ့ app ကိုမှထိပ်တန်းကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းပြသမှုအကြောင်းအရာ, iTunes ကရုပ်ရှင်တွေကနေဒီအမှု၌, ဒါပေမဲ့ဒီလို Netflix ဟာအဖြစ် apps များသင်တို့၏မကြာသေးမီကစောင့်ကြည့်သမိုင်းကိုပြသနိုင်. ဓါတ်ပုံ: ပန်းသီး
Apple ရဲ့ TV ပေါ်မှာအကြောင်းအရာအမြင်ကျယ် Apple နှင့် Third-party ပစ္စည်းပစ္စယများကထောက်ပံ့ပေးသောအရာတို့ကိုခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်. Apple ရဲ့တပ်၌ရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီရှိုးများအတွက် iTunes ကစတိုးဆိုင်မှဝင်ရောက်ခွင့်သည်, Apple ကဂီတသို့မဟုတ်သင့် iCloud ဂီတစာကြည့်တိုက်, iCloud ဓါတ်ပုံများနှင့် App Store ကို.
သငျသညျ Apple ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်သုံးစွဲလာသောအခါထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုမပြီးဆုံးသေးသောဖြစ်ကြောင်းအလွန်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောကြောင့်ဖွင့်. အကို iTunes စတိုးကနေရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီရှိုး - - Apple ကအပေါ်အချိန်နှင့်အာရုံစူးစိုက်သုံးစွဲသိရသည်သောသူတို့သညျအလှနျကောငျး. Siri ကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်, က slick င်နှငျ့သငျ Apple ရဲ့ဂေဟစနစ်သို့ပလပ်နေလျှင်, ဒါကြောင့်စိတ်ကူးင်.
ဒါပေမဲ့ Apple ကတီဗီရဲ့ဂီတ app ကိုအသုံးပြုစိတ်ပျက်စရာင်ဒါကြောင့်အခြေခံပညာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာကနေတစ်ခုခုများကဲ့သို့ခံစားရ 2006, ဧရာစာရင်းကတဆင့် scrolling, အဘယ်သူမျှမလျင်မြန်စွာ skip ဖို့လမ်းသို့မဟုတ်ရှာဖွေရေးနှင့်အတူထပ်ခါထပ်ခါပွတ်ဆွဲခြင်း. Siri ရုံမျှမကသင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပြောပါတယ်. ငါ iTunes Match အတွင်းကြီးမားတဲ့ဂီတစာကြည့်တိုက်ရှိသည်နှင့်ငါ့ကိုယူ, တိုက်ရိုက်, ZZ ထိပ်တန်းမှ AC / DC ကမှ scroll ဖို့အကြောင်းငါးမိနစ်.
သင်သည်လက်ျာအနုပညာရှင်မှရရှိပါသည်ပြီးတာနဲ့, အယ်လ်ဘမ်ရွေးချယ်ရေးဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့အပုဒ်ကျော်လောကီဖြစ်ပါသည်. ကို Select လုပ်ပါ, စာစောင်ကို, နောက်တဖန်အကို select လုပ်ပါ. လာမည့်လမ်းကြောင်းမှသငျသညျအရအဘယ်သူမျှမ button ကိုသို့မဟုတ်အမူအရာရှိတယ်. အခြားအမှုအရာအကျင့်ကိုကျင့်စဉ်ကိုသင်နောက်ခံဂီတကစားနိုင်ပါတယ်ကြောင့်ပိုမိုဆိုးရွားလုပ်မယ့်. သငျသညျခဏနားပြီးကျန်တာတွေကိုကစားနိုင်ပါတယ်, သင်လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင်သင်မူကားပြန်ဂီတပလီကေးရှင်းသို့အပေါင်းတို့သည်လမ်းကိုတူးဖို့ရရှိပါသည်.
Apple ရဲ့ TV ကိုထိုသို့သွားသည့်တစ်ကြီးမားတဲ့အရာအမြစ်တွယ်နေပြီး iOS ကိုပြုစုသူအသိုင်းအဝိုင်းကဖြစ်ပါတယ်. အခြားသေတ္တာများ, ထိုကဲ့သို့သော Amazon ရဲ့မီးသတ်တီဗီအဖြစ်, apps တွေရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကအခြား developer များကြောင့် bespoke app များကိုဖန်တီးရန်အဘို့အက Apple TV ကိုတတ်သောသရေကျထားပါတယ်.
Siri ရှာဖွေရေးနှင့်အတူပေါင်းစပ်ရာ - - Apps ကပ YouTube နဲ့အခုတော့တီဗီကနေ Netflix ဟာအထိစျေးဝယ် apps များမှ, ရာသီဥတု apps များ, ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်အဘို့အထွက်အလုပ်လုပ်ဘို့အပလီကေးရှင်းများနှင့် app များ. ဘီဘီစီ iPlayer သေးမရရှိနိုင်. အဘယ်သူမျှမ ITV Player ကိုအဲဒီမှာဖွင့်, အားလုံး 4, Google Play စသို့မဟုတ်အမေဇုံချုပ်ဗီဒီယို.
apps စာရင်းကိုတိုးချဲ့ဖို့သာဖွယ်ရှိသည်, သင့် TV ပေါ်မှာစျေးဝယ်လိုထမဆုံးစေခြင်းငှါ, စဉ်, အကို iOS App Store မှာဆိုအရိပ်အယောင်ပါလျှင်ကရေခဲတောင်များရုံပျဉ်းင်.
အဆိုပါ Apple က TV ကိုတစ်ဦးက iPad Air လေကြောင်းလိုင်းအဖြစ်အကြောင်းကိုအဖြစ်အစွမ်းထက်သည်2ဒါသော graphical အရည်အသွေးအလားတူအဆင့်အတန်းနှင့်အတူဂိမ်းကို support. Apple က "console ကိုအရည်အသွေး" သူတို့ကိုခေါ်ဆို; ထိုကဲ့သို့သောမီးသတ်အပေါ်က Galaxy အဖြစ်အချို့သော, ကြည့်ကောင်းရှုကောင်း. အခြားသူများကရိုးရိုး cutesy ဂိမ်းတွေဟာ.
ဝေးလံခေါင်ဖျားသုံးပြီးသူတို့ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်စေတစ်ဦး Wii-တူသောအတွေ့အကြုံ, ဥပမာတစ်ခုဘေ့စ်ဘောလင်းနို့ကဲ့သို့ဝေးလံခေါင်ဖျားတဝိုက် swinging, ဒါမှမဟုတ်ကိုပွတ်ဆွဲခြင်းနှင့်ကလစ် နှိပ်. ကိစ္စ. ငါမဟုတ်, အထူးသဖြင့်ကျေနပ်စရာတွေ့ရှိရ, အပျနှံလို, တုံ့ပြန်မှု Arcade ဂိမ်းခလုတ်များနှင့်လျင်မြန်စွာရွေ့လျားမှုဂိမ်းငြီးငွေ့ကြီးထွားလာ.
သင်တစ်ဦးယာယီ console ကသို့ကဖွင့်ဖို့ Third-party controller စဆက်သွယ်နိုင်သည်, ဒါပေမဲ့မတိုင်းဒီဂိမ်းကထောက်ခံပါတယ်. အဆိုပါထူးဆန်းတဲ့အရာကိုသင်သုံး controller စနှင့်တစ်ဦးဝေးလံခေါင်ဖျားအထိဆက်သွယ်နိုင်သည်ဖြစ်ပါသည်, တစ်ဝေးလံခေါင်ဖျားထက်ဒါပေမဲ့မပို, သောမေးခွန်းထဲက Wii တင်းနစ် Analogues စေသည်. ထိုကဲ့သို့သော Crossy လမ်းမကြီးအဖြစ် two-player ကိုဂိမ်း, သင်တစ်ဦးဒုတိယ Controller အနေနဲ့ iPad နဲ့ iPhone ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားရာ, ပါတီမှာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းသောခဲ့ကြ.
ဂိမ်းများပုံမှန်အားဖြင့်လျင်မြန်စွာကို download လုပ်ပါ, ငါမူကားအချို့သူ့ကို graphically အထူးကြပ်မတ်ဂိမ်းအဆက်မပြတ်တစ်ခုခုကို download လုပ်ခဲ့ရသည်ကိုတွေ့. သင် app ကိုစတင်ခင်မှာ, နောက်တဖန်သင်တို့ level ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြိုးစားသောအခါ. ဒါဟာလျင်မြန်စွာပင်ပန်းတယ်တယ်.
မည်သည့် iPhone ကိုအတူဝေးလံခေါင်သီအကျင့်ကိုကျင့်၏အောက်ခြေပေါ်မှာ Lightning port ကို5သို့မဟုတ်အသစ်များအားသွင်း, ဒါပေမယ့် box ထဲမှာတယောက်ရှိပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
သငျသညျပုဂ်ဂလိကနားထောင်ခြင်းများအတွက် Apple က TV ကိုတိုက်ရိုက် Bluetooth ကိုနားကြပ်တစ်ခု set ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်.
အဆိုပါ့ screensavers - ပျံသန်း-ကျော်ကမ္ဘာတဝှမ်းမြို့နှင့်ရှုခင်းများ၏ဗီဒီယိုဖိုင်, လန်ဒန်မြို့ကနေဟာဝိုင်ယီမှ - စစ်မှန်စွာစိတ်ကိုဖမ်းစားကြသည်.
"ကျယ်သောအသံ Reduce" dynamic range ကိုချုံ့နိုင်ပါတယ်, ကျယ်သောအသံနှင့်ဆိတ်ငြိမ်အသံအကြားပမာဏကွာခြားချက်ကိုထုတ်သောအဆင့်များနှင့်ညအချိန်သင်၏အိမ်နီးချင်းများအတွက်ပိုကောင်းနားထောင်ခြင်းကိုမှန်ကန်စေသည်.
အဆိုပါ Ethernet port ကို 100mbps မှာထွက်ထိပ်ဆုံးမှ. အများကြီးပိုမြန်အမြန်နှုန်းသည် Wi-Fi မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ပါ.
Siri ကိုသင့်ရဲ့တည်နေရာနဲ့ဦးစားပေးသိဖို့ရည်ရွယ်သည်, ဒါပေမယ့်သုံးပြီး၏ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အဘို့အကြှနျုပျကိုစင်တီဂရိတ်ဖာရင်ဟိုက်၌ငါ့ရာသီဥတုမပေးခြင်းအပေါ်အခိုင်အမာ.
ဝေးလံခေါင်ဖျားအလိုလိုသိသည်မဟုတ်. ငါက touch pad နှင့်သင်ကကိုအသာပုတ်မနှိပ်ခဲ့ရသည်ကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့သည့်တိုင်အောင်ဧည့်သည်များကထွက်တွက်ဆလို့မရဘူး.
အဆိုပါမီနူးခလုတ်ကိုတစ်ကျောခလုတ်ကိုနှင့်အန်းဒရွိုက်သို့မဟုတ် Windows ဖုန်းတွင်ပြုသကဲ့သို့အလုပ်ဖြစ်တယ်. အဆိုပါ home ခလုတ်ကိုပေါ်မှာတီဗွီဖန်သားပြင်လိုဂိုနှင့်အတူတစျခုဖွစျသညျ.
အဆိုပါ Apple က Remote App ကိုသစ်ကို Apple ကတီဗီနှင့်အတူအလုပ်မလုပ်ပါဘူး.
ဂီတထဲမှာ output ကိုဖြစ်ပါတယ် 5.1 surround sound, မင့်စတီရီယို, သင်တစ်ဦး surround sound system ကိုရှိပါက.
အဘယ်သူမျှမ 4K ထောက်ခံမှုရှိပါတယ်, ယခုပြဿနာတစ်ခုသောမက, ဒါပေမဲ့အနှစ်ရဲ့နောက်စုံတွဲအတွက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ.
Siri ဖို့ "သူဘာပွောခဲ့" ဟုဆိုပြန် skip လိမ့်မည် 10 ဗီဒီယိုစာတန်းထိုးပေါ်တွင်တင်စက္ကန့်နှင့်.
စတုတ္ထမျိုးဆက် Apple ကတီဗီသိုလှောင်မှု 64GB များအတွက်သိုလှောင်မှု 32GB နှင့်အတူ£ 129 နှင့်£ 169 ကုန်ကျ.
နှိုင်းယှဉ်, 4K နှင့်အတူအမေဇုံမီးသတ်တီဗီ£ 80 Roku ကုန်ကျ3£ 100 အကုန်ကျများနှင့် Google မှ Chromecast ကို£ 30,.
အဆိုပါ Apple က TV ကိုအပြည့်အဝဖုတ်မဟုတ်ပါဘူး. အဆိုပါဗီဒီယိုအစိတ်အပိုင်းများခြားနား, ဒါပေမယ့်မရရှိနိုင်ပါအကြောင်းအရာများကိုဗြိတိန်အတွက်သတ်သည်. အဆိုပါဂီတ app ကိုဆင်းရဲ, ဝေးလံခေါင်ဖျား app ကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူးနှင့်အခြား-bits ပဲအဆင်သင့်မဟုတ်. သစ်တစ်ခုက Apple TV ကိုလွှတ်ပေးရန်သုံးနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်စောင့်ဆိုင်းဘဲလျက်, အဘယ်ကြောင့်မပြည့်စုံ?
ဝေးလံခေါင်ဖျား marmite ကဲ့သို့ဖြစ်၏, လူဖြစ်စေအဲဒါကိုကိုချစ်သို့မဟုတ်မုန်းကြလိမ့်မည်, နှင့် interface ကိုဖန်စီကြည့်နေစဉ်, သူ့ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဆင်းရဲနှင့်အထူးသဖြင့်အသစ်ဘာမှမိတ်ဆက်ပေးမထားဘူး.
အဆိုပါ App Store ကို Apple ရဲ့ TV ကိုဖွင့်ကယ်တင်သောသခင်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်. လူအပေါင်းတို့သည် streaming များဝန်ဆောင်မှုများကိုရရှိနိုင်ပါမည်လောထင်ရှားစေခြင်းငှါဖြစ်နေဆဲ. အမေဇုံချုပ်ဗီဒီယိုမဖြစ်နိုင်ပုံရတယ်, သငျသညျသာဓကတစ်ခုအိုင်ပက်မှ AirPlay ကျော် streaming အခြားသူများအားနှုနျးနိုင်ပေမဲ့.
အဆိုပါ Apple ကတီဗီကယ့်ကိုကောင်းဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိပါတယ်, နှင့်ပြဿနာများကိုအများစုဆော့ဖ်ဝဲကိုမွမ်းမံမှုများအားဖွငျ့ကိုဆုံးနိုင်, ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာကအများကြီးစျေးသက်သာပြိုင်ဘက်အဖြစ်မကောငျးကြောင်းတိုးတက်မှုအတွက်အလုပ်င်.
အကောင်းအဆိုး: App Store ၏အာဏာကို, iTunes က Apple နှင့်ဂီတမှဝင်ရောက်ခွင့်, ကောင်းသောစကားသံကိုထိန်းချုပ်မှု, volume အတှကျမှာ IR ထိန်းချုပ်မှု, ရွေ့လျားမှုဂိမ်းကစားခြင်း
Cons: ဝက်ဖုတ်, ဂီတ app ကိုဆငျးရဲသား, Siri ဂီတရှာဖွေရန်နှင့်သာ iTunes နှင့် Netflix နဲ့မနိုင်, ပျောက်ဆုံးအများဆုံးဗြိတိန် streaming များန်ဆောင်မှု, အဘယ်သူမျှမ HDMI cable ကို, အဘယ်သူမျှမဝေးလံခေါင်သီ charger ကို
တစ်စမတ်တည်းသို့သင်တို့၏စကားမပြောနိုင်သောတီဗီကိုဖွင့်ဖို့အကောင်းဆုံးသတင်းမီဒီယာ-streaming များ boxes တွေကိုငါးခု
Google က Chromecast ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: သင့် TV စမတ်အောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလမ်း
ပန်းသီး, Apple က TV ကို, App များ, အပိုဒ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, IOS ကို, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, နည်းပညာ, ရုပ်မြင်သံကြား
← ပန်းသီး, Google နှင့် Microsoft က: အားနည်းစာဝှက်စနစ်အတွက်မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေပေးနိုင်ပါတယ် Beeline စက်ဘီးစီးအညွှန်း device ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: စူးစမ်းရှာဖွေသူများအဘို့အစိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့ပျော်စရာ →